Mgbanwe ihu igwe na-ebibi akuku coral na Japan | Network Meteorology
na Osisi coral ha bụ usoro okike nke na-emetụta oke mgbanwe mgbanwe gburugburu ebe obibi. Mgbanwe dị na nnu nnu, ịta ahụhụ nke mmetọ ma ọ bụ mmụba nke okpomọkụ nwere ike imetụta obodo coral. Mgbanwe ihu igwe Ọ na-emetụta akuku coral n'ihi mmụba ogo abụọ na ogo mmiri dị na mpaghara ebe achọtara ha.
Coral fọdụrụnụ nọ n'ihe ize ndụ nke ịla n'iyi ma ọ bụrụ na ọnọdụ ndị a anọgide na-adị. Coral dị n'akụkụ agwaetiti Ishigaki na agwaetiti Okinawa ma kwupụtara na ọ bụ ebe nchekwa ihe. Ọ nwere karịa ụdị 70 nke coral a na-ewere ya dị ka otu n’ime akpụrụ mmiri kacha ochie na nnukwu mmiri n’oké ugwu niile.
Bilisi Coral na-acha ọcha mgbe ọnọdụ gburugburu ebe obibi adịghị mma ma ha na-anwụ. 97% nke coral nke na-eme ka mmiri a dị ọcha na 56% anwụọla. Dika okpomoku mmiri si ebili n'ihi mgbanwe ihu igwe na okpomoku uwa nke coral enweghi ike imeghari na mgbanwe di otua. Na coral, anụmanụ niile metụtara ha ma nke ahụ dabere na coral ibi ndụ.
Ihe butere ogo nke mmiri gbara gburu gburu site na ogo abụọ bụ ihe gbasara ihu igwe a maara dị ka Nwa nwoke. El Niño na-eme ka okpomọkụ nke mmiri dị n'oké osimiri dịkwuo elu ma nye aka na ịchacha coral. Bleaching na-emekwa mgbe coral na-eche mgbanwe dị ukwuu na nri na ọkụ.
Eziokwu ahụ coral na-amalite ịnwụ na-etinye ọtụtụ ụdị azụ na-adabere na mmiri dị n'akụkụ mmiri maka nri na ebe nzuzo. Ọ bụrụ na anwụrụ gas na-aga n'ihu na ọnụego ha dị taa, ebu azụ nwere ike ịda n'etiti 10 na 30% site na 2050 dị ka data IUCN.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Meteorology » Mgbanwe ihu igwe » Mgbanwe ihu igwe na-ebibi akuku coral na Japan
Nke a bụ ụdị ụgbọ agha ndị agha na-achụ oke mmiri